စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ။ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ စီမံကိန်းများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုခြေရာခံရန်လျှောက်လွှာ Linux မှ
စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ - လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမံကိန်းများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုခြေရာခံရန်လျှောက်လွှာ
ဒီကနေ့ငါတို့လျှောက်လွှာတစ်ခုထပ်မံလေ့လာ ဦး မည် အသုံးပြုသူကုန်ထုတ်စွမ်းအားဆိုလိုသည်မှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်သည် ခြိုးခြံခြွေ, ရိုးရှင်းပြီးအချက်မှဖြောင့်သို့မဟုတ်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုများစွာတန်ဖိုးထားစေသည်၊
စူပါကုန်ထုတ်စွမ်းအား - စာရင်းလုပ်ရန်နှင့်အချိန်ခြေရာခံခြင်း App ကိုလုပ်ရန်
ငါတို့မမြင်ရသောသူတို့အဘို့ ယခင်ဆက်စပ် post ခေါ်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား app ကိုအတူ "စူပါကုန်ထုတ်စွမ်းအား" o "Superproductivity"ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးနောက်သင်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ရန်အောက်ပါလင့်ခ်ကိုချန်ထားပါသည်။
"Superproductivity ဦး ဖြစ်ပါတယ်Personal Task List, Time Tracker နှင့် Task Manager လျှောက်လွှာများသည်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲသူများနှင့်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်အလုပ်သမားများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Jira, Github နှင့် Gitlab ပလက်ဖောင်းများနှင့်လည်းပေါင်းစည်းထားသော။ ထို့အပြင်၎င်းသည် cross-platform (Linux, MacOS နှင့် Windows) ဖြစ်ပြီး၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအသုံးပြုသူများသည်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောအလုပ်များအတွက်သုံးစွဲရသောအချိန်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်အလုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုစုဆောင်းရန်နေရာတစ်ခုပေးရန်ဖြစ်သည်။ ။" စူပါကုန်ထုတ်စွမ်းအား - စာရင်းလုပ်ရန်နှင့်အချိန်ခြေရာခံခြင်း App ကိုလုပ်ရန်
1 စီစဉ်သူ: Task Manager
စီစဉ်သူ: Task Manager
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအထူးဖော်ပြထားတယ် -
" ၎င်းသည်လျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည် Task ကိုအုပ်ချုပ်ရေး အတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ Task Lists နှင့်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် GNU / Linux များ."
သူတို့ရဲ့နေစဉ် ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အကျိုးခံစားခွင့် အောက်ပါထင်ရှားစွာပြ:
၎င်းသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားဆိုင်ရာ application တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သုံးစွဲသူများ၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုအောင်မြင်ရန်ကူညီသည်။ အလုပ်များ၊ စီမံကိန်းများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအားလုံးကိုတစ်ခုတည်းသောရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေရာတွင်လွယ်ကူစွာစောင့်ကြည့်ခြင်းအားကူညီသည်။
Todoist Platform (https://todoist.com/es) ရှိအကောင့်တစ်ခုဖြင့်ထပ်တူပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ဒေသအလိုက်နှင့်အွန်လိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
၎င်းသည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ပါ ၀ င်သည့်လုပ်ငန်းများကို (များစွာသော (သို့) အနည်းငယ်) ကိုကဏ္sectionsများ ခွဲ၍ ခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့်စီမံကိန်း၏အစီအစဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။
မှတ်စုများထည့်ခြင်း၊ URL များပြခြင်း၊ သတ်မှတ်ရက်များဖန်တီးခြင်းနှင့် tags များထည့်ခြင်းတို့ကိုပံ့ပိုးပေးသည့်လှပပြီးကြော့ရှင်းသောအမြင်အာရုံမျက်နှာပြင်ရှိသည်။
၎င်းတွင်စပိန်ဘာသာစကားအပါအ ၀ င်ဘာသာစကားမျိုးစုံအထောက်အပံ့ရှိသည်။
သူ၏နောက်ဆုံး လက်ရှိဗားရှင်း, ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အရေအတွက်အား 2.6.9 ရက်အနည်းငယ်အကြာကဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့်ပြောင်းလဲမှုများစွာတို့တွင်ပရောဂျက် subproject ရှိမရှိသိရန်အမြင်ညွှန်ပြချက်အသစ်၊ subprojects ပြိုလဲခြင်းသို့မဟုတ်ချဲ့ခြင်းများအတွက် UX တိုးတက်မှု၊ ကဏ္andများနှင့်ဇယားများတွင်ထည့်သွင်းထားသောအလုပ်ကောင်တာပေါင်းအသစ်သောဘာသာပြန်များပါဝင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင်လျှင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
လျှောက်လွှာကိုမှတိုက်ရိုက် install လုပ်ဖို့ရရှိနိုင်ကတည်းက အွန်လိုင်းစတိုး de la Distro မူလတန်း, နှင့်အခြားသူများမှတဆင့် ".Flatpak ပုံစံ"အောက်ပါတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနောက်ဆုံးနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည် link ကိုဆိုလိုသည်မှာအောက်ပါ command ကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။
ထည့်သွင်းပြီးပါက၎င်းကိုဖွင့်နိုင်သည် လျှောက်လွှာမီနူးအိုင်ကွန် ဒါမှမဟုတ်အောက်ပါ command command ဖြင့်:
အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များ «စီစဉ်သူ» အောက်ပါအတွက်အောင်မြင်နိုင်ပါသည် link ကို.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Planner», အရာ၏တစ် ဦး အသုံးဝင်သောနှင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ application ဖြစ်ပါတယ် Task ကိုအုပ်ချုပ်ရေး အတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ Task Lists ၎င်းကို GNU / Linux အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ - လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမံကိန်းများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုခြေရာခံရန်လျှောက်လွှာ
W3C သည် WebRTC အဆင့်အတန်းကိုပေးခဲ့သည်
Firefox 85 သည် Flash ကိုနှုတ်ဆက်သည်နှင့်တိုးတက်မှုအမျိုးမျိုးဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်